I-Bricker Brush Abavelisi kunye nabaXhasi | I-China Slicker Brush Ifektri
Ukulungiswa kweenja zeSlicker Brush
I-1.Dog yokucheba ibrashi ineentloko zeplastiki ezomeleleyo ezinezikhonkwane zensimbi ezingenasinxibe ezikumgangatho ophezulu, inokungena nzulu edyokhweni ukususa ibhatyi evulekileyo.
Ukuzilungisa izinja ngokususa ngobunono kususa iinwele ezikhululekileyo, kususe iitang, amaqhina, ukuntywila kunye nokungcola okukhoyo ngaphakathi kwemilenze, umsila, intloko kunye nenye indawo ebuthathaka ngaphandle kokukrwempa kwesikhumba sakho.
3.Ukuzilungisa inja kungasetyenziselwa ukufuya izilwanyana ezomileyo ezinesikhumba esibuthathaka kunye neebhatyi eziluhlaza.
Ukunyuka kwegazi okwandayo kunye nokushiya izilwanyana zakho zangaphantsi zithambile kwaye zikhazimla. Ukwenza ukuxubha isilwanyana sakho ngamava akhululekileyo kwaye amnandi.
I-5.Ergonomic design grip ibonelela ngentuthuzelo xa uxubha nokuba ungkama ixesha elingakanani, yenza ukuba ukuzilungisa kube lula.
Amacala amabini aFlexible Pet Slicker Brush
1.Pet Slicker Brush yenza umsebenzi omkhulu wokucoca iinwele ezixineneyo, ngakumbi emva kweendlebe.
Ikwaguqukayo, eyenza ukuba ikhululeke ngakumbi inja.
I-3.Amacala amabini aguqukayo asisilwanyana esineebhrashi ezitshixwayo iinwele zincinci, ngenxa yoqhankqalazo oluqhelekileyo lwezinja luye lwasuswa.
4.Lebrashi iyaqhubeka ukuhla ngokusebenzisa iinwele ukunceda ukuthintela ukukhula.
Ukuzicoca ngokwakho ukuCoca iiNja
1.Lo nto yokucoceka ngokwakho kwizinja yenziwe ngentsimbi engenasici, ngenxa yoko ihlala ixesha elide.
I-2.Iintambo ezigobileyo zentsimbi kwibrashi yethu eyilelweyo yenzelwe ukungena nzulu kwingubo yesilwanyana sakho ngaphandle kokukrwela ulusu lwesilwanyana sakho.
3.Ibrashi yokucoca ngokwakho izinja iyakushiya isilwanyana sakho ngebhanti ethambileyo kunye nebengezelayo emva kokusetyenziswa ngelixa usiphulula kwaye uphucula ukujikeleza kwegazi.
Ukusetyenziswa rhoqo, oku kuzicoca ngebrashi kuya kunciphisa ukuphalaza kwisilwanyana sakho ngokulula.
Ukucoca isiQinisekiso sePet
Ikati yeenja zeenja eziTyhidiweyo
1.Lenja yeenkuni iklicker ibrashi isusa ngokulula i-mat, amaqhina kunye ne-tangles kwidyokhwe yenja yakho.
2.Lebrashi yinto entle eyenziwe ngobugcisa beech eyakhiwe ngesandla yenja yekati eyakhe imilo yonke eyenzela wena kwaye ibonelela ngoxinzelelo oluncinci kulowo uzilolayo nakwizilwanyana.
Le brashi inja ineebristles ezisebenza kwi-engile ethile ukuze zingakrweli ulusu lwenja yakho, le brashi yenja yekati eyenziweyo yenza ukuba izilwanyana zakho zilungiswe kwaye ziphathwe ukuze zithanjiswe.